China Crankshaft shiididda giraangiraha vitrified bonded shiididda giraangiraha iyo alaab-qeybiyeyaasha | YUXINGAN
Shaadhka shiidada ee shaadhka Vitrified ee giraangiraha shiida
Goobta Codsiga: Inta badan waxaa loo isticmaalaa shiididda gawaarida kala duwan ee gawaarida, cagaf-cagafyada iyo makiinadaha gaadiidka. Qayb ka mid ah waxay sidoo kale ku habboon tahay shiididda camshaft.
Astaamaha: Alaabtu waxay leedahay saxnaanta sare, waxqabadka dheelitirka wanaagsan, waxqabadka shiididda wanaagsan, iyo adkaanta; xasillooni wanaagsan, dayactirka xagal R wanaagsan, oo aan guban si ay workpiece ah.
Faahfaahin: VP-750×75×305 - PA/WA -F60-N-60m/s
Faahfaahin: VP-900×35×305 - PA/WA -F60-M-60m/s
Goobaha lagu dabaqi karo
Shaagagga wax lagu shido ee loo yaqaan 'crankshaft' waxaa inta badan loo adeegsadaa baabuurta, markabka, cagaf-cagafyada, mishiinka mootada iyo makiinadaha macdanta. Matoorka naaftada iyo shafka kale, habka shiididda camshaft. Burburinta dhammaan noocyada alwaaxyada cranks iyo isku xirka ulaha.
Astaamaha Shiidasha giraangiraha
dheelitirka joogtada ah ee taxanaha shiidi giraangiraha ee shirkadeena waa ka sarreeya heerka qaranka 30 ~ 50%, oo waxa uu leeyahay selfsharpness wanaagsan iyo dayactirka wanaagsan ee fillet. ayaa 50% ka wanaagsan heerka qaranka. Weelashada dhumucda giraangiraha wax lagu shiidi karo waa in ka yar 0.2mm iyo barbar-dhiggu waa in ka yar 0.1mm. Saxnaanta joomatari ee heer sare ah; Waxqabadka shiididda wanaagsan; Xasilooni adag oo heer sare ah; Haysashada xagasha R ee ugu fiican iyo fursadaha gubashada oo yar;
Taayirrada waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu shiido dhammaan noocyada shaafuuryada iyo kaamerooyinka baabuurta, mooto cagaf cagaf, engine markabka iyo sidoo kale mashiinada gaadiidka iwm. ka baxsan waxqabadka dheelitirka, iyo waxqabadka kharashka iwm.
Resion bond inta badan waxaa lagu sameeyaa xabagta kulaylka lagu daaweeyay oo inta badan ka kooban phenolic resib Resin bond wheel waxa uu leeyahay awood shiidi heer sare ah, dhammayn dusha iyo jajabinta ugu yar. Waxaa si weyn loo codsadaa qalabka ay adag tahay in-mashiinka sida carbide sibidhka, ceramics, galaas, iyo silikon iyo sidoo kale maaddooyinka bir ah sida biraha-xawaaraha sare leh iyo biraha ferrous sintered.
Casiirka Vitrified waa shay xidha vitreous guud ahaanna waxa uu ka kooban yahay daldaloollo gudaha ah halka walxaha kale aanay ku jirin daloolo. Sidaa darteed taayirada curaarta vitrified waxay leeyihiin awood wax shiididda oo aad u fiican waxayna ka sarreeyaan samaynta.
Hore: Balan Roll Resin Resin Bonda Qalabka Dabaysha Taayirrada Dheemanka
Xiga: Balan Roll Resin Resin Bonda Qalabka Dabaysha Taayirrada Dheemanka
Korundum Worm shiidida giraangiraha
Taagerada Hal Dhinac Shiidaa Vitrified Tapered ee...
Alumina Caddaan Taagerada Gudaha wax shiida ee Sare...
Qeybta Shiidada Aluminium Oxide